hisoloan’ireo ekipa hifanandrina hilalao ao aminy akanjo fa manana “vestiaire” miisa 8 be izao samy misy toerana fidiovana sy fivoahana maromaro avy ity kianja ity fa ny resaka seza fipetrahana ao aminy no mila ezaka manokana avy aminay ny fametrahana azy ary koa ireo toerana fanatonana akanjo sy ny fametrahana latabatra hanaovana “massage” an’ireo mpilalao ihany koa. Sisa ataonay ankoatra izay dia ny mametra nomerao an’ireo toerana hipetrahan’ny mpijery ihany koa. Ny mikasika ny fisian’ireo mpivaro-kazo manamorona ny lalana fidirana ato amin’ity kianja ity dia efa nanaiky ny fandaminana natao ireo mpivarotra fa hanala an’izany toeram-pivarotany izany.
Marihako fa efa nisy solontenan’ny FMF tonga nanome hevitra anay amin’ireo zavatra tokony hokarakaraina hahatomombana an’ity kianja ity tsara. Vonona izahay ny handray ny Fifa sy Caf izay ho tonga hanome fankatoavana an’ity kianja Stadium Barikadimy ity ary vonona ihany koa ny handray ny Barean’i Madagasikara sy ny ekipam-pirenen’i Côte d’Ivoire amin’ny faha-31 martsa 2020 izao.